Munaasibad Loo Sameeyay MIdawga Labada Urur Siyaasadeed Ee Jamhuuriga Iyo RAYS | Araweelo News Network (Archive) -
Munaasibad Loo Sameeyay MIdawga Labada Urur Siyaasadeed Ee Jamhuuriga Iyo RAYS
Hargeysa(ANN)Munaasibad si weyn loo abaabulay oo ujeedadeedu ahayd midawga labadii Urur siyaasadeed ee u horeeyay ee midooba 15-ka Urur ee isu diiwaan geliyay tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo axsaabta qaranka ayaa maanta lagu qabtay
Huteelka Imperial ee Magaalada Hargeysa waxaana ku midoobay Labada urur siyaasadeed ee Rays iyo Jamhuuriga.
Xaflad loo sameeyay midowga labadaa urur siyaasadeed oo ka mid ahaa 15 kii urur siyaasadeed ee Guddida diiwaan gelintu ay siiyeen shahaadada ururnimo waxa ka soo qeyb galay Gudoomiyayaasha labad urur siyaasadeed ee Jamhuuriga Mudane Cismaan Xasan Mire iyo Gudoomiyaha ururka Rays Xasan Maxamed Cali (Xasan Gaafaadhi) iyo sidoo kale saraakiisha labadaa Urur taageerayshooda iyo marti sharaf kale.
Muuse C/llaahi Nuur oo ka mid ah masuuliyiinta laba Urur oo hadal ka jeediyay munaasibadaa ayaa sheegay in labaddan urur ay yihiin labaddii urur ee ugu horeeyay ee midooba, iyaga oo diwaan gashan, isagoo yidhi, “labaddan urur waa labaddii urur ee ugu horeeyay iyaga oo isdiwaan galiyay isla markaana buuxiyay Shuruudihii laga rabay oo maanta midooba” ayuu yidhi Muuse C/lahi Nuur, waxana uu intaasi raaciyay “hashiiska labadda urur ku midoobeen waxa uu yimid ka dib markii hadalo iyo kulano goo-goos ay yeesheen labadda urur”
Muuse C/llaahi Nuur ayaa madashaa ka sheegay in labadda Gudoomiye ee Rays iyo Jamhuurigu ay maanta halkan iskugu yimaadeen inay saxeexaan Qodobaddii ay ku midoobeen, isagoo arrintaa ka hadlayana wuxuu yidhi, “maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 02/Febawari/2012, waxa ay labadda Gudoomiye oo ka wakiil ah taageerayaashoodda ay halkan iskugu yimaadeen in ay saxeexaan Hishaaska iyo qaodoba ay wadda galleen”.
Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka Rays Xasan Gaafaadhi oo ka hadlay munaasibadaa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay la midoobaan urur siyaasadeedka Jamhuuriga oo uu sheegay inay isku waafaqeen inay midoobaan.
“Waxaanu nahay labadii urur siyaasadeed ee u horeeyay ee diiwaan gelintii ka dib isku biiray, waxaan u soo jeedinayaa ururada kalena inay sidan oo kale sameeyaan waayo dalku ma qaadi karo ururada xad dhaafka ah,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Ururka Rays. Wuxuuna xusay in diiwaan gelintii ka hor ururkooddu uu la midoobay Ururkii Wada-jir oo ka mid ahaa ururadii lagaga dhawaaqay Hargeysa.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Urur siyaasadeedka Jamhuuriga Cismaan Xasan Mire ayaa guul weyn ku sifeeyay midowgaa, isagoo balan qaaday inay diyaar u yihiin cidii kale ee ku soo biiraysa midowga labadan urur. Cismaan Xasan Mire waxa uu sheegay in talaabadan ay qaadeen ay ku jirto danta qaranka, wuxuuna xusay inay culays ka fudeydiyeen dalka, maadaama ay tirada Ururada is diiwaan geliyay gaadhay 15 Urur. Sidaa awgeed ay maslaxada qaranka iyo guushuba ku jirto in la midoobo.
Geba gebadii munaasibadaa waxay gudoomiyayaasha labada Urur ee Jamhuuriga iyo Rays qalinka ku duugeen qodobada heshiiska ay ku midoobeen, iyagoo maantaba Guddi farsamo u saaray inay isku soo dubo-ridaan shirweynaha ay qabsan doonaan iyo magacii ay isla qaadan lahaayeen.